Khabiirka Caqli-galinta: Sidee Badanaa Ugu Bixin Kartaa Boostada Isgaarsiinta Bulshada
Guusha ay ka soo gaartay qaybta suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa waxaa go'aaminaya dhowr arrimood, iyo joogtaynta waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Ku dhajinta ereyga asalka ah iyo kan cusubba waxay si joogta ah u siiyaan ganacsatada warbaahinta bulshada fursad wanaagsan oo ay ula macaamilaan dadka isticmaala. Ku-dhajinta naqshadaynta waxay taageertaa taageerayaashaada suurtagalka ah inay danahooda u gudbiyaan suuqyada kale ee warbaahinta bulshada oo si joogta ah u soo dhajinaya isla ganacsiga - best small business network setup.
Dhibaatada ka weyn tahay lama xoojin karo marka ay timaado suuq-geynta warbaahinta bulshada. Ku dhajinta marar badan waxay keenaysaa in badan oo ah darajo, dhacdo taas oo ka dhigaysa in macaamiishu ay dhici karto inay kaa joojiyaan oo ay xannibaan. Isku dheellitiridda posts waa mid aad muhiim u ah si kor loogu qaado badbaadadaada suuqa. Waxaad u baahan tahay inaad isku dheelitirto mawduucyadaada si aad ugu dhejiso inay ku haboonaato, iyo inaad ku kalsoonaatid kalsoonidaada isticmaalayaashaaga
Waxbarashada khubarada waxaa loo doodaa marka ay timaado suuq-geynta warbaahinta bulshada. Waxaa jira khubaro badan oo leh xirfado lagama maarmaan ah, kuwaas oo awood u leh in ay si joogta ah ugu diraan meelo badan oo warbaahinta bulshada ah. Si aad ugu guuleysatid suuqa, falanqee waxa khabiiradu sameeyaan oo raacaan istraatijiyadooda.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt Adeegga Dijitaalka, Julia Vashneva wuxuu siinayaa tilmaan kaa caawin doona inaad kor u qaaddo ka qaybgalayaashaada mashaariicda warbaahinta bulshada.
Sannado dhowr sano ka dib, Kormeerayaasha Bulshadu waxay sameeyeen daraasad si ay u xalliyaan macnaha dhabta ah ee tweeting joogta ah. Daraasaddooda ayaa baaray in ka badan 11,000 tweets oo ka yimid noocyo kala duwan. Dareemayaasha Bulshadu waxay ogaadeen in inta jeer ee soo dhejinta tweets ay ku xiran tahay hadafka iyo ujeedooyinka macmiilka. Ujeedada ugu muhiimsan ee tweets waa in ay wax ku ooliyaan iyo abuuraan si toos ah hawlgal kasta halkii tweet.
Kormeerayaasha Bulshada ayaa sidoo kale soo gabagabeeyay in dhajinta in ka badan 40 tweets maalintiiba ma saameynayso waxqabadka koontadaada. Si aad u soo saarto jawaabo badan oo ku saabsan tweet-kaaga, tixgeli inaad ka hadashid habka aad dareensan tahay hareerahaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talin karaa inaad soo dirto qaar ka mid ah tweets xisaabtaada oo maskaxda ku haysa in hadafyadaagu waa in la buuxiyo dhammaadka maalinta. Tusaale ahaan, waqtiga loo isticmaalo qorista iyo boostada 40 tweets ayaa loo adeegsan karaa suuq geynta Twitter.
Kobcinta hawlgelinta waxay kor u qaadaysaa jiilka jawaabaha ee Twitter. Intii aad diiradda saari laheyd dhalashada jawaabaha, ka shaqee kor u qaadista ka qayb qaadashada dadka isticmaalna waxaadna ku jiri doontaa dhinaca ammaanka.
Suuqgeynta Facebook waxay u baahan tahay in la ilaaliyo sharciyo u leh saameyn togan iyo mid xunba ee suuqa. Xeerka 'laba post ee maalinta' waa mid ka mid ah xeerarka caadiga ah ee la isticmaalo marka ay timaado suuq-geynta Facebook. Si loo maamulo suuq-geynta Facebook, waxaad u baahan tahay in ka badan 10,000 oo qof oo raacsan. Soo diridda laba goor maalintii waxay ku dhejisaa suuqyadda Facebook si ay kor ugu qaadaan ka qaybgalka iyo kordhinta xayeysiinta content.
Si kastaba ha noqotee, macmiilka ayaa ka tagay si uu u doorto marka tirada soo socota ay ka yar tahay 10,000. Haddii aad isku aragto xaalad sidan ah, waxaad dooran kartaa inta u dhexeysa helitaanka fara badan ee ku jira boggaaga ama kor u qaadista ka qaybgalka boostada. Hubspot.com waxay sameeyeen daraasad lagu ogaanayo qaadashada kumbuyuutarrada oo leh in ka yar 10,000 oo qof oo raacsan. Waxaa la ogaadey in ka-qaybgalka boostada ee suuqa oo leh wax ka yar 10,000 taageerayaal had iyo jeer hoos u dhigo.
Instagram wax yar bay u shaqeysaa sida Twitter iyo Facebook. Si joogta ah ugu dir bogga Instagram ma kobcineyso Your Instagram Marketing. On Instagram, joogteynta waxaa loo doodaa halkii ay ka badan lahaayeen. Daraasad ay sameysay Ururka Metrics Union ayaa tilmaamaya in soo dhajinta ay si joogta ah u shaqeyneyso si kor loogu qaado hawlgelinta marka la barbardhigo si joogta ah.
Si loo abuuro tiro badan oo taageerayaal ah Instagram, u tixgeliyaan soo dhajinta in ka badan 15 jeer. Nasiib wanaag, si joogta ah u soo dhajinta bogga Instagram ee warbaahinta bulshada ma saameynayo xisaabtaada si xun. Si aad ula socotid taageerayaasha Instagram, billow inaad soo dhejiso waxyaabo aad ku sii soconayso. Joogso si joogta ah si loo abuuro ka qaybgalid boostada.
Gebogebo, habka ugu wanaagsan ee lagu guulaysto suuq-geynta warbaahinta bulshada waa adoo samaynaya khabiirada ay sameeyaan. Arrintani waxay noqon kartaa wax yar oo wareersan. Tirada soo noqoshada mareegaha warbaahinta bulshada waxay ku xirantahay hadafyadaada iyo ujeedooyinkaaga. Qodobbada kor ku xusan waxay kaa caawin doonaan inaad go'aamiso inta jeer ee aad ku dhajin kartid boggaaga warbaahinta bulshada, iyo inaad abuurto jawaab ku filan iyo kaqeybqaadasho.